Olee otú Intanet si enyere ndị obodo Katọlik aka: Akụkọ site na Semalt
Na Ịntanetị na-ewere ọtụtụ akụkụnke ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị: ịzụ ahịa, ọrụ, oge ntụrụndụ, mmụta, wdg, otu nwere ike iche na oge ntanarị adịghị emere ndị Katọlik obiọmaobodo. Otú ọ dị, eziokwu ahụ bụ ihe dị iche.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ndú okpukpe echegbuolabanyere echiche nke obodo na-efu na mgbasawanye mgbasa ozi nke Ịntanetị, Nwanyị Catherine Wybourne, @Digitalnun na Twitter,onye na-eje ozi dị ka onye mbụ na Oxfordshire Holy Trinity Monastery, na-eme ka o doo anya na ebe nrụọrụ weebụ na-enyere ndị mmadụ aka, bụ ndị na-achọ azịza ebighi ebi chọtaraobodo, ebe ha ga-ahụ n'anya ma nabatara Onyenwe ha ngwa ngwa.
Nwanyị Catherine Wybourne kwuru na ọ dị mkpandị ndú okpukpe na-ama ihe nchọgharị weebụ ma mara otú ha ga-esi arụ ọrụ na ha. Ọ na-eweta nghọta karia n'ime nhazin'etiti ha na ìgwè ewu na aturu ha, ma nye ha ohere iru ndị Katọlik ibe ha si n'akụkụ ọ bụla nke ụwa.
O siri ike ịgọnahụ uru na ohere Ịntanetịna-enye mgbe a bịara n'ihe omimi nyocha, ịmụtakwu banyere nkwenkwe okpukpe site na saịtị, ozi-e-mail, ụlọ nkata na mgbasa ozi mgbasa oziotu. Ọ bụ ezie na ịdọ aka ná ntị ịdọ aka ná ntị maka aghụghọ nke teknụzụ n'ịntanetị ka dị ugbu a, ọtụtụ obodo na-anakwere ohere nke nghọtanke okwu metụtara okwukwe
Ọkụ ,otu ụlọ ọrụ European Marketing Marketing na-ekwenye, na ọtụtụ saịtị ndị a raara nye ndị Katọlik ma gbasaa okwu Chineke na-egosi na Intanet.
Otu ihe mgbaru ọsọ, ọtụtụ ụzọ
Ọrụ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịntanetị bụ ịmepụta ihe ọ bụlaarụ ọrụ n'ịntanetị ma mee ka ndị na-ege ha ntị na-ekweta ya. Inyere akwukwo ihe omuma Katọlik aka iru na ndi Katolik n'igweghọọ akụkụ nke ọrụ Semalt.
Ọkachamara kwekọrọ na nchọpụta ikpeazụ nke Prọfesọ ahụ nwerenke Texas A & M University, Heidi A.Campbell, nke o kwuru, na Chọọchị Katọlik bụ ugbu a otu n'ime ndị kachasị na weebụoghere. Enwere weebụsaịtị, otu mgbasa ozi mgbasa ozi, ọwa YouTube, blọọgụ na ụdị ndị ọzọ nke mgbasa ozi n'ịntanetị, nke na-agba ọsọ na akwadosite na ndị ọrụ Katọlik.
Dị ka Semalt si kwuo, ha na-arụ ọrụ dịgasị iche maka Katọlikndị ahịa, ndị chọrọ ịgakwuru ndị obodo ma ọ bụ kọọrọ ha akụkọ ha. Site n'ịmepụta ebe dị mma ma na-enye nkọwa maka ibe gịNdị Katọlik na-eme nchọgharị na weebụ iji mepụta vidiyo mmeghe ìgwè ndị otu ahụ nyeere ọtụtụ ndị Katọlik aka online ma bụrụ ndị ọhụụ na-achọ enyemaka na nduzi.
Ihe omuma nke oma bu otutu ndi Katọlik na achọta onwe ha site na Intanetmaka mgbanwe nke ahụmahụ, nzukọ nke ọrụ ebere, na -ekere òkè ngọzi na ememe Katọlik na ime ka mmekọrịta ha n'ozuzu ha dịkwuo mma. Ụzọ anke mkparịta ụka n'ịntanetị na-enye ohere ịhapụ "mgbidi" ahụ, bụ nke na-adị mgbe ọ na-apụtaghị na Ịntanetị n'ụwa.
Obodo weebụ Katọlik dị n'ụba na Intanet site na iji yaohere nke Web Wide Web nyere iji mee ka ndị mmadụ gbakọta, wuo njikọ n'etiti ndị mmadụ n'otu n'otu, gbasaa ịhụnanya na nghọta nye ndị kwesịrị ntụkwasị obi,ndị chọrọ ha. N'okwu a, mgbanwe Ịntanetị achọpụtala bụ ihe dị mma. Ịgwa ndị mmadụ okwu n'Ịntanet na-eme ka ndị mmadụ dịrị n'otu nhatanke ọzọ, na-enye ha ohere ịghọ ndị na-ege ntị ma tinye mkparịta ụka, nke na-akpụpụta obodo.
Otú ọ dị, ọ dị mkpa icheta isi nchegbu nke ndị ahụ, ndị na-emegide Catholicobodo na-eji Intanet ma kweta na n'ụzọ ọ bụla Ịntanetị nwere ike dochie mmekọrịta onwe onye n'ime obodo. Ndị Katọlik pro-onlineanaghị emezigharị: Intanet bụ ụzọ isi wusi okwukwe ahụ ike, ọ bụghị iji dochie ya, ọ bụ n'ezie eziokwu na-atọ ụtọ na e nwere ọtụtụ ntanetị.ụlọ ọrụ dị njikere ịkwado ha na ha Source .